CES 2018: प्यानासोनिकले यसको OLED टिभीहरू प्रस्तुत गर्दछ ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | छवि र ध्वनी, टिभीहरू
CES २०१ many धेरै नयाँ सुविधाहरूको साथ किक अफविशेष गरी टिभी बजारमा। यस बर्षदेखि धेरै ब्रान्डले उनीहरूको समाचार प्रस्तुत गर्न यस घटनाको फाइदा लिन्छन्। प्यानासोनिक ती मध्ये एक हो जसले OLED टेलिभिजनको नयाँ दायरा प्रस्तुत गर्दछ। दायरा जुन हामीले २०१ 2017 मा पहिले नै भेट्यौं। अब, यो दायरा पूर्ण रूपमा नविकरण गरिएको छ। ब्रान्डले एक पेशेवर छवि गुणवत्ता प्रस्ताव गर्नका लागि आफ्नो प्रयासहरू केन्द्रित गर्न रोजेको छ।
हलिउड डिलक्स संग गठबन्धन को लागी धन्यवाद उनीहरु अझ राम्रो छवि गुणवत्ता प्राप्त गर्न को लागी आशा गर्छन्। प्यानासोनिकले यो यति राम्रो भएको आशा गर्दछ कि यो सिनेमा मानकको नजिकै आउँदछ। कम्पनीले CES २०१ at मा हाम्रो लागि स्टोरमा के छ?
1 चार नयाँ मोडेलहरू
2 HDR10 + गतिशील मेटाडेटा
3 Panasonic हाई-रेज अडियो
चार नयाँ मोडेलहरू
यो कुल चार नयाँ मोडेलहरू छन् जुन प्यानासोनिकले प्रस्तुत गर्दछ। तिनीहरू दुई फरक दायराका हुन्। हामीसँग भेट्यौं: -1000 इन्च EZ77 र FZ950 र FZ800, दुबै 65- र 55-इंच मा उपलब्ध छ। ब्रान्डका सबै मोडेलहरूमा हामी नयाँ फेला पार्दछौं HCX 4K प्रोसेसर, जुन सुधार गर्न खोज्छ OLED मा HDR छविहरू। थप रूपमा, यसले उत्तम कन्ट्रास्ट र रंग गामट प्रदान गर्दछ, जुन ब्रान्डको अनुसार एक अरब शेडहरू समावेश गर्दछ।
यो प्रोसेसर समावेश गर्दछ पेशेवर थ्रीडी LUT तालिकाहरू (तालिकाहरू हेर्नुहोस्)। यी तालिकाहरू हलिउडमा उत्पादन कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछन् र अधिक सटीक रंगहरू प्रस्ताव गर्छन्। यसका लागि धन्यवाद, र color्ग खाली ठाउँहरू सही हुन्छन् र फिल्महरू उनीहरूको निर्देशकले सिर्जना गरेको जस्तो देखिन्छ।
FZ950 र FZ800 दायरा समावेश गर्दछ इमेजिंग विज्ञान फाउंडेशन (isf) क्यालिब्रेसन सेटिंग्स। तिनीहरूले नयाँ समावेश गर्दछ क्यालिब्रेसन पोइन्ट, २.2,55% ल्युमिनेन्स र पोर्ट्रेट डिस्प्लेको CalMAN AutoCal प्रकार्यतासँग उपयुक्त छ। यसको मतलब तिनीहरू क्यालिब्रेसन र एक महान छवि को प्रेमी को बारे मा जानकार छ।
HDR10 + गतिशील मेटाडेटा
यस प्रस्तुति द्वारा प्यानासोनिकले हामीलाई धेरै चाखलाग्दो शब्दले छोडेको छ। हामी प्राय: कम खास शब्दहरू सुन्छौं, यस अवस्थामा यो बारेमा "HDR10 + गतिशील मेटाडाटा"। यो के हो? यो टेक्नोलोजी हो जसले मद्दत गर्दछ छविहरूको गतिशील दायराको फाइदा लिनुहोस् त्यस्तो अवस्थामा पनि जहाँ मूल स्रोतसँग विशिष्ट प्रमाणीकरण छैन।
प्यानासोनिकका अनुसार उनीहरूले यस नयाँ प्रविधिको साथ भविष्यको आशा गरेका छन्। साथै उसको प्रतिद्वन्द्वी। तिनीहरूको टेलिभिजन पछि अब उनीहरू भविष्यका एचडीआर मानकहरू समर्थन गर्दछन् जुन अझसम्म घोषणा गरिएको छैन। त्यसैले तिनीहरू मिल्दो हुन पहिलो हुनेछन्। सबै चार टेलिभिजनहरू मानकहरूसँग अनुरूप छन् HDR10 र HDR10 + कम्पनी द्वारा पुष्टि भएको रूपमा।
थप रूपमा, ती सबै छ अल्ट्रा HD प्रीमियम र THX प्रमाणीकरण। थप रूपमा, कम्पनीले अनुकूलक थप गरेको छ डायनामिक दृश्य 'र एक स्वत: HDR ब्राइटनेस एन्हान्सर। पछिल्लो औसत प्रयोगकर्ताहरूको लक्ष्य हो, जो जटिल सेटिंग्स र क्यालिब्रेसनहरू वा अत्यधिक जटिल सर्तहरू चाहँदैनन्। त्यसोभए यो धारणा छ कि ती छविहरूको विश्लेषण गर्छन् र उत्तम गुण स्वचालित रूपमा देखाउँछन्।
Panasonic हाई-रेज अडियो
चित्र गुणस्तर Panasonic को लागी आवश्यक छ, जस्तो कि हामीलाई अहिले सम्म स्पष्ट गरीएको छ। तर, यो महत्त्वपूर्ण छ कि कम्पनीले अडियो बेवास्ता गर्दैन। अपेक्षित जस्तो केहि भएको छैन। पछि कम्पनीले यस पटक आफ्नै टेक्नोलोजीको लागि रोजेको छ। यो "टेकनिक्स द्वारा ट्यून गरिएको छ" सन्तुष्टि बिना अडियोको राम्रो स्तर प्रस्ताव गर्न डिजाइन गरिएको हो। केहि चीज जुन हामी चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू देख्छौं वा खेलहरू खेलिरहेका छौं।
यो एक प्रविधि हो जुन एक गतिशील स्पिकर समावेश गर्दछ जुन आठ बहु-स्पिकर एकाईहरूमा विभाजित छ। त्यसो भए, एक वक्तामा त्यहाँ चार वूफरहरू, चार स्क्वाकरहरू र दुई ट्वीटरहरू छन्। एक चौगुना निष्क्रिय रेडिएटर हुनुको साथै बास बढाउने कार्य गर्दछ। छोटकरीमा, यो ठूलो देखिन्छ र ठूलो गुणको आश्वासन दिन्छ।
प्यानासोनिकले दावी गरेको छ कि गत बर्ष उही दायरामा अडियोमा %०% वृद्धि हुनेछ। तर यी सबै आकार बढाउन वा डिजाइन परिवर्तन गर्न आवश्यकता बिना नै पूरा गरियो। यसैले त्यहाँ ब्रान्डले राम्रो काम गर्यो। उपभोक्ताहरूले सकारात्मक रूपमा मूल्यवान् गर्न अपेक्षा गरेको केहि चीज।
सबै चारै प्यानासोनिक मोडेलहरू २०१ of को पहिलो आधामा सुरूवात हुनेछन्, दुबै युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका मा। तर सही मिति अझै प्रकट गरिएको छैन। तिनीहरू मार्केटमा पुग्ने मूल्य कि त थाहा छैन। हामी आशा गर्दछौं कि Panasonic आफैंले यसलाई चाँडै नै पुष्टि गर्नेछ। तपाईं यी नयाँ मोडेलहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » छवि र ध्वनी » टिभीहरू » Panasonic CES 2018 मा आफ्नो नयाँ OLED टिभी डेब्यु